Joyina Uhlelo Lwemiklomelo Yezinwele Ezingavuthiwe lwe-SL – SL Raw Virgin Hair LLC.
Ivuza Indlela Yakho
Khetha indlela ofuna ukuzuza futhi usebenzise ngayo
Uzozuza amaphuzu fnoma zonke izinhlobo zemisebenzi kusayithi lethu, njengokudlulisela kanye nokuthenga. Ungazisebenzisa ukuze uzuze izaphulelo ekuthengeni, ngakho lapho uqoqa okuningi yilapho ulondoloza kakhulu. Ukuze ubone zonke izindlela ongathola ngazo amaphuzu futhi ubhalisele uhlelo lwethu Lwemiklomelo, ngena ku-akhawunti yakho bese uya lapha. Ungakwazi futhi ukujoyina uhlelo lwethu lwemiklomelo ngokuchofoza okuthi "Zuza Imiklomelo" ekhoneni eliphezulu kwesokunxele eliboniswe kudeskithophu yakho.
Sebenzisa amaphuzu akho kunoma yikuphi ukunikezwa okungezansi
Ukujoyina kulula! Vele uchofoze inkinobho ethi Dala I-akhawunti ukuze uqalise. Uma usubhalisiwe esitolo sethu, uzoba nethuba lokubamba iqhaza kuzo zonke izindlela ezijabulisayo esizinikezayo okwamanje ukuze uzuze amaphuzu!
Ngingawathola kanjani amaphuzu?
Ungazuza amaphoyinti ngokubamba iqhaza kunoma yimaphi amaphromoshini ethu amasha! Vele uchofoze kuthebhu ethi 'Zuza Amaphuzu' ukuze ubuke futhi ubambe iqhaza emathubeni ethu amanje. Ngaphezu kwalokho, qiniseka ukuthi ubuya njalo, njengoba sengeza izindlela ezintsha ezinhle zokuthi uzuze amaphuzu ngaso sonke isikhathi!
Ngingawasebenzisela ini amaphuzu ami?
Ngiyajabula ukuthi ubuze! Sifuna ukwenza kube lula futhi kujabulise ukusebenzisa amaphuzu owasebenzele kanzima. Vele uvakashele ithebhu 'Thola Imiklomelo' ukuze ubuke zonke izinketho zethu zomklomelo ezijabulisayo.
Ngiwasebenzisa kanjani amaphuzu ami?
Ukushintsha amaphuzu akho ukuze uthole imiklomelo emikhulu bekungeke kube lula! Vele uvakashele ithebhu 'Thola Imiklomelo' ukuze ubuke zonke izinketho zethu zemiklomelo emikhulu bese uchofoza inkinobho ethi 'Sebenzisa' ukuze usebenzise umvuzo wakho.
Ngiyibheka kanjani ibhalansi yamaphuzu ami?
Ibhalansi yakho yamaphuzu akamuva ihlala iboniswa phezulu kwalokhu okuzivelelayo.
Ingabe kubiza okuthile ukuze uqale ukuzuza amaphuzu?
Akunjalo! Ukubhalisa kumahhala angu-100%, futhi akusoze kwakubiza lutho ukuzuza amaphuzu. Qiniseka ukuthi uvakashela ithebhu 'Yokuzuza Amaphuzu' ukuze uqalise.
Ingabe kufanele ngibhalise noma ngibhalise kumaphromoshini angawodwana?
Uma usubhalisele i-akhawunti, usulungile - asidingi ukuthi ubhalisele ukukhushulwa komuntu ngamunye ukuze ufaneleke. Vele ugcwalise izimfuneko zephromoshini, futhi sizothumela amaphuzu ku-akhawunti yakho ngokushesha!
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi amaphuzu athunyelwe ku-akhawunti yami?
Kufanele uthole amaphuzu ku-akhawunti yakho ngokushesha uma usuqede ukunyuswa!
Ingabe amaphuzu ami aphelelwa yisikhathi?
Cha! Amaphuzu akho awasoze aphelelwa yisikhathi.
Kwenzekani kumaphuzu ami uma ngenza imbuyiselo?
Uma ubuyisela into, ulahlekelwa yikhredithi ehlobene oyizuze ekuqaleni ngokuthenga into kwasekuqaleni.
Umsindo onjani wokudida? Ake sithathe isibonelo: ake sithi ngaphambilini ubusebenzise u-$50 ukuze 'usebenzise u-$100, uzuze amaphuzu angu-500', bese unquma ukuthenga into engu-$20, ekwenza ufinyelele ku-$70. Uma unquma ukubuyisela leyo nto, ukuqhubeka kwakho kuzophindela emuva ku-$50 - kufana nokuthi awuzange uthenge into kwasekuqaleni.
Ngixhumana kanjani nosekelo uma nginemibuzo mayelana namaphoyinti ami?
Ithimba lethu lilungile futhi lilinde ukuphendula imibuzo yakho mayelana nohlelo lwethu lwemiklomelo! Vele usithumelele i-imeyili sizobe sesikuthinta.
Ngisondele kakhulu ekutholeni umklomelo. Ngingakwazi ukuthenga amaphuzu engeziwe ukuze ngifike lapho?
Okwamanje sidinga ukuthi ube namaphoyinti anele ukuze usebenzise noma yimiphi imiklomelo oyibona esohlwini lwethebhu ethi 'Thola Imiklomelo'.
Kuzokwenzekani uma ngingafuni ukuthola ama-imeyili okukhangisa?
Ngezikhathi ezithile, uzothola ama-imeyili ahlobene nohlelo avela kithi Uma ungathanda ukungatholi lezo zinhlobo zama-imeyili, vele uchofoze inkinobho ethi 'Zikhiphe ohlwini' lapho uthola i-imeyili yakho elandelayo.